शाकाहारी एग्प्लान्ट र चिक्का बर्गर | ThermoRecines
Verduras30 मिनेट4 व्यक्ति170२ क्यालोरी
के तपाईंलाई सम्झना छ? च्याउ र काजू बर्गर? ठिकै छ, मँ आज तपाईलाई केहि नयाँ ल्याए veggie बर्गर: de berenjena y छोला तिनीहरू धेरै राम्रो छन् र एकमा मिल्ने आदर्श हो पेनकेक वा सलाद संग पिटा रोटी, तिनीहरू जस्तै फालाफेल। तिनीहरू जस्तै दही सासको लागि मर्दछन् एग्प्लान्ट र परमेसन मीटबलहरू।
मैले तिनीहरूलाई अलिकति कुटीज चीज, एक सुन्दर खाद्य फूल र महको एक बून्द्रोको साथ प्लेट गरेको छु, जस्तो बगैचा मीटबलहरू.
1 एग्प्लान्ट बर्गर
सब्जी बर्गर, औबर्जिन र छोलाको साथ।
भान्छा कोठा: शाकाहारी
खाना पकाउने समय: 25M
१ ठुलो एग्प्लान्ट (२०० ग्राम लगभग)
२०० ग्राम छोला, पकाइन्छ र पकाइन्छ
१ प्याज (१ g० ग्राम लगभग)
Table टेबलस्पून ब्रेडक्रम्बहरू
प्याज र एग्प्लान्ट काटिएको गिलास मा ठूलो टुक्रा मा राख्नुहोस्, स्वाद गर्न नुन, भुइँ कालो मिर्च र तेल। हामी काट्छौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
को लागी Sauté Minutes मिनेट, १००º, गति १।
छोला जोड्नुहोस् र काट्नुहोस् Seconds सेकेन्ड गतिमा।
फेरी को लागी Sauté Minutes मिनेट, १००º, गति १।
यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्।
हामी अण्डाहरू र ब्रेडक्रम्ब्स थप्दछौं। हामी मिक्स गर्दछौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
हामीसँग एउटा कम्प्याक्ट मास हुनुपर्दछ, ह्यामबर्गरहरू आकार दिन सक्षम हुन। यदि होईन भने, अधिक ब्रेडक्रमहरू थप्नुहोस् र १ seconds सेकेन्डको लागि वेग at मा मिक्स गर्नुहोस्।
आटाको साथ, हामी आफ्नो हातले बलहरू बनाउँछौं र हथेलीमा थोरै स्क्वाश गर्दछौं, ह्यामबर्गरलाई आकार दिन्छ।
हामी तिनीहरूलाई सीधा ग्रिलमा पोष्ट गर्न सक्छौं, वा भुँसी नभएसम्म पारदर्शी फिल्मको दुई पानाहरू माझ फ्रिजमा राख्न सक्छौं।
तिनीहरूलाई ग्रिलिंग अघि स्थिर गर्न सकिन्छ।
तिनीहरू लगभग ha ह्यामबर्गर बाहिर आउँछन्।
यदि तपाई अधिक खोज्न चाहानुहुन्छ भने थर्मोमिक्सको साथ शाकाहारी व्यंजनहरू, हामीले भर्खरै छोडेको लिंक प्रविष्ट गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, १/२ घण्टा भन्दा कम, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, शासन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सलाद र तरकारीहरू » Veggie बैंगन बर्गर
ग्लोरिया पारा रिक्वेना भन्यो
धन्यबाद धेरै मलाई यो धेरै मन पर्छ, यो पनी महान छ
Gloria Parra Requena लाई जवाफ दिनुहोस्
आना थर्मोरसेटस भन्यो
धन्यबाद, ग्लोरिया! चुम्बन!
Ana Thermorecetas लाई जवाफ दिनुहोस्
म अझै पनि, Javier! तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्नेछ! त्यो सुझावको लागि धन्यबाद!
तिनीहरूले मलाई मंत्रमुग्ध गरे !! तिनीहरू केवल थोरै नरम थिए, मैले उनीहरूलाई थोरै ब्रेडक्रमहरूसँग गाढा बनाउनुपर्थ्यो, ग्रिलमा उनीहरूले अलि अलि अलि रोकाए। यसो गरेमा उनीहरूलाई प्रशस्त तेल फ्राई गर्नु राम्रो होइन र? राम्रो तर सबै स्वादको तिनीहरू उत्कृष्ट छन्। धन्यवाद!!!
नमस्ते पीटर !!!! हो, ब्रेडक्रम्ब चीज आँखाले अलि छ, किनकि यो बैंगनको पानीमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं देख्नुहुन्छ कि आटा नरम छ, थप थप्नुहोस्। र धेरै राम्रोसँग छोडे। उफ, मेरो लागि यो बैगना फ्राई गर्ने ... यति तेल लिन्छ। मसँग एउटा नन-स्टिक ग्रिडल छ जुन तपाईं प्रयास गर्नुभए पनि टाँसिनुहुन्न, तर तपाईं नन-स्टिक फ्राइ pan प्यान (यसलाई थोरै तेलले फैलाउँनुहोस्) वा भट्टीमा पनि, बेकिंग कागजको मुनि, जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। चार्ट पेनकेक्स मलाई लाग्छ उनीहरू राम्रा देखिन्छन्। एक चुम्बन !!!!
जुआन्जो नवामुएल भन्यो
नमस्कार! मैले भर्खरै ह्यामबर्गरको आटा बनाएँ… के म त्यसलाई भोलि फ्रिजमा राख्न सक्छु ???? म तिनीहरूलाई अब आकार दिन सुरु गर्न अल्छि छु 🙁
जुआन्जो नावमुएललाई जवाफ दिनुहोस्
ओह, जुआन्जो। मलाई लाग्छ म केहि ढिला भयो। तर हो, त्यहाँ कुनै समस्या थिएन। तपाईंले फ्रिजमा पिठो हाल्नुहुन्छ र भोली बनाउनुहुन्छ। के महत्त्वपूर्ण छ ताकि पिठोलाई अक्सिडाइज गर्न र धेरै अँध्यारो नपार्नको लागि के तपाईंले यसलाई पारदर्शी फिल्मले कभर गर्नुभयो, जसले गर्दा फिल्म र पीठो बीच कुनै हावा हुँदैन। तर यदि तपाईंसँग छैन भने केहि पनि हुँदैन। यो केवल एक सौन्दर्य प्रश्न हो। म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। अंगालो!
ओह त्यो चाल मलाई थाहा थिएन
मैले यसलाई एउटा ट्युपरवेयरमा राखें र आज दिउँसो म तिनीहरूलाई बनाउने काम समाप्त गर्नेछु, किनकि यो अलि नरम पनि छ र मैले सोचेँ कि चिसोसँग यसले एकरूपतामा सुधार ल्याउनेछ। यदि होईन भने म अझ रोटी थप्छु।
धेरै धेरै धन्यबाद, तिनीहरू पनी महान छन्
अना जोस पर्रिला भन्यो
म तपाईंलाई ह्यामबर्गरहरू बनाउनको लागि मोल्ड दिँदैछु ... ताकि तपाईं अल्छी हुनुहुन्न र तिनीहरू परिपूर्ण बाहिर आउछन्
अना जोसे पर्रिलालाई जवाफ दिनुहोस्
हाहाहा मसँग यो पहिले नै छ !!!! तर यो एक हजार, hahahaha थियो
ठीक छ, यसले एक मिनेट लिन्छ ... ढिलो नगर्नुहोस्
नमस्कार, मैले नुस्खा बनाइसकेको थिएँ र जब मैले प्लेटमा तिनीहरूलाई पल्टें तिनीहरू विभाजन भयो, र तिनीहरू फोटोमा जत्तिकै अँध्यारो भएनन्, बरु तिनीहरू धेरै हल्का थिए। कि यदि तिनीहरू महान स्वाद, hehe
के तिनीहरू विभाजित भए? के तपाईंले थप ब्रेडक्रम्बहरू राख्नुभयो? यस्तो लाग्दछ कि त्यहाँ धेरै छ ... मेरो कालो अन्धकार छ किनभने जब म तिनीहरूलाई मेरा बच्चाहरूसँग आकार दिन्छु, यसले हामीलाई लामो समय लिन्छ र यो केही बिभिन्न अप समाप्त हुन्छ। यदि तपाईंलाई यसको जस्तो र dark गाढा मनपर्दछ, आटा थोरै आराम गरौं र यो अँध्यारो हुनेछ। मलाई खुशी छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो, नतालिया। चुम्बन !!!
न त मैले ती मध्ये छोपिदिएँ र मैले माथि देखेको छु कि कसैले सोधेको छ यदि उनीहरू छिलिन छ भने। हुनसक्छ त्यसकारण तिनीहरू पनि स्पष्ट थिए। शेल र अधिक ब्रेडक्रमहरूको साथ अर्को व्यक्तिहरू।
मेरो प्रश्न यो हो कि यदि तपाईंले एगप्लान्टमा छाला हटाउनु पर्छ भने
ANGUS लाई जवाफ दिनुहोस्
होईन, यो आवश्यक छैन, एन्गस। अंगालो!
अंडा र ब्रेडक्रम्ब्स थपे सम्म तपाईले यसलाई कत्ति समय चिसो पार्नुपर्दछ ???
यो न्यानो नभएसम्म, Sandra। यो यस्तो छ कि अण्डा सेट छैन। चुम्बन!
धेरै धनी के तपाईंसँग दाल बर्गरको लागि एक नुस्खा छ?
एनी सोफी भन्यो
नमस्कार !! म यो नुस्खा बनाउन चाहान्छु तर मलाई धेरै शंका छ किनकि म धेरै शेफ होइन। .. डबल गर्नका लागि तपाईले सबै चीजको डबल गर्नु पर्छ? र मलाई कसरी थाहा छ कि आटाको सही स्थिरता के हो? जस्तै जब तपाईं समुद्रको किनारमा हिउँको पोइन्टमा सवारी गर्नुहुन्छ: कुन कुराले यसलाई घुमाउँछ र खस्दैन? र त्यसोभए तपाईं ग्रिलमा जानुहुन्छ (प्यानमा राम्रोसँग मेरो केसमा), कम तातो वा उच्च तातो? मँ प्रश्नहरु को लागी माफी चाहन्छु, ती पक्कै स्पष्ट छन् तर के म धेरै ह्यामबर्गर रेसिपीहरु कोशिस गर्दै छु र ती मध्ये कुनै पनि सहि बाहिर आएन?
एनी-सोफीलाई जवाफ दिनुहोस्
अण्डा गोरा, कुनै लागत, माफ गर्नुहोस्?
नमस्ते एनी-सोफी, चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईंलाई चाहिएको सबै कुरा सोध्नुहोस् जुन हामी हौं जुन हो र हामी सबैले गल्तीहरू गरेर र चिनेकालाई सोधेर सिक्यौं।
वास्तवमा, तपाईले डबल गर्न केवल x2 र voila को संख्याहरू गुणा गर्नुपर्नेछ। पीठोको स्थिरतालाई व्याख्या गर्न गाह्रो छ, मलाई लाग्छ अण्डाको सेतो उदाहरणले हामीलाई यस मामलामा सहयोग गर्दैन किनभने मासु र गोरा धेरै समान छैनन् - हेही तर म तपाईंलाई भन्छु कि यो आटा हुनु पर्छ कि तपाईं हातले राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईं यसलाई ह्यामबर्गर आकार दिन सक्नुहुन्छ र आकार बाँकी छ। म निम्न सुझाव दिन्छु: जब तपाईंले पीठो बनाउने काम समाप्त गर्नुहुन्छ, केही लिनुहोस् र यसलाई तपाईंको हातले ह्यामबर्गरमा आकार दिने प्रयास गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कि यो भत्कन्छ वा स्थिर रहन्छ। अभ्यासको साथ तपाईं स्थिरता र बनावटको पोइन्ट पाउनुहुनेछ। (मैले मेरो जीवनमा बनाएको पहिलो मीटबलहरू स्टीलको बलजस्तै थिए ... उनीहरूलाई खान्ने कोही थिएन किनकि उनीहरू कडा र सुख्खा थिए ...)।
ग्रिल / प्यानमा तिनीहरूलाई पकाउन, तपाईं हेमबर्गरको प्रत्येक पक्षमा अलि तेलको साथ फैलाउन सक्नुहुनेछ र जब प्यान तातो हुन्छ, तिनीहरूलाई मध्यम-उच्च तातोमा पकाउनुहोस्। निश्चित रूपमा जब तपाइँ ती सबै पकाउन समाप्त हुन्छ, अन्तिम व्यक्तिहरू पहिले नै साइडमा छन्। तपाईंले प्रयास गर्नुभएको बर्गर तपाईंको लागि राम्रो बाहिर किन आउँदैन? तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ !! साहस र भाग्य, भान्सा अभ्यास को एक धेरै हो, तर तपाईं देख्नुहुनेछ कि अन्त मा तपाईं यसलाई embroidering अन्त 😉
यदि कसैलाई खराब नुस्खाको लागि रिपोर्ट गर्न सकिन्छ भने, मँ। म एक घण्टाको लागि भान्छामा भएको छु र मसँग यसको लागि हावा छिन ... मलाई के थाहा छैन। मैले सबै कुरा पत्रमा पछ्याएको छु, र त्यसले सिमेन्ट थपेर पनि काम गर्दैन।
र मैले ब्रेडक्रम्बसको दोस्रो ब्याच जोडेको छु जुन तपाईंले मात्र केसमा संकेत गर्नुभयो। कुनै नराम्रो कुरा होइन, तपाईं यसलाई आकार दिनुहुन्छ, यसलाई प्यानमा राख्नुहुन्छ, र जे पनि समय बित्दछ, तपाईं यसलाई पल्टाउने प्रयास गर्नुहुन्छ र त्यो मात्र हुन्छ जुन अलग हुन्छ।
रोड, निराश नहुनुहोस् र अभ्यास जारी राख्नुहोस्। तपाईंको छोला सायद राम्रो ढined्गले निकालेको थिएन र थप रोटीक्रमहरू थपेमा समस्या समाधान हुने थियो। स्पष्ट रूपमा बनावट मासुको जस्तो हुन सक्दैन।
रडले तपाईंलाई नुस्खा रिपोर्ट गर्ने कुराको अनादर गरेको जस्तो देखिन्छ, जब कसैले उनीहरूको सबै इच्छा र काम हामीलाई दिएमा यसलाई साझा गर्छ। हुनसक्छ यो तपाईको समस्या हो कि तपाईलाई यो कसरी गर्ने सही तरीकाले थाहा छैन वा तपाईले यसको ह्या hang्ग पाउनु भएको छैन। इरेन आर्कास, नुस्खाका लागि धन्यवाद, तिनीहरू स्वादिष्ट छन्! तपाईको काममा बधाई छ। शुभकामना
नातिलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको टिप्पणीको लागि नातीलाई धन्यबाद। कहिलेकाँही रेसिपीहरू बाहिर आउँदैनन् किनकि सायद एउटा कदम गलत गरिएको छ। थर्मोरसेटसमा, हामीले प्रकाशित सबै रेसिपीहरू टोलीद्वारा धेरै पटक परीक्षण गरिन्छ र हाम्रा किचेनहरू वा स्टुडियोहरूमा फोटो खिच्दछन्, त्यसैले तिनीहरू गलत हुन सक्दैनन्। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद;) !!
जे भए पनि तपाईले जति धेरै रोटी फ्याँक्नुभयो, यो क्रोकेट्सको प्रकारको आटा जस्तो रहन्छ, उनीहरूलाई परिस्थितिमा बाहिर आउन असम्भव हुन्छ, मैले चरण-बिन्दुमा क्रमशः अनुसरण गरेको छु र तिनीहरू बाहिर आउँदैनन्।
२०० ग्राम खोर्सको वजन भनेको खाना पकाउनु भन्दा पहिले वा एक पटक पकाइन्छ?
ईड्यालाई जवाफ दिनुहोस्
एन बीबी भन्यो
मैले भर्खर तिनीहरूलाई गरेँ र म तिनीहरूलाई मन पराउँदिन। यो क्रोकेट्सको आटा जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू कुनै चीजको स्वाद गर्दैनन्। मैले बनाएको रेसिपीहरूमध्ये यो एक हो जुन मलाई कम भन्दा कम मनपर्‍यो।
N BB लाई जवाफ दिनुहोस्
हेरौं .. मैले यो रेसिपी करीव times पटक बनाइसकेको छु र यो सँधै घरेलु वा ब्रेडक्रम्बहरू किन्नुपर्‍यो, मैले ट्रिपल ब्रेडक्रम्ब्स लगाउनुपर्‍यो (छोला पनि राम्रोसँग कुरे पनि), त्यसो भए पनि यसलाई संभाल्न गाह्रो छ, त्यसैले म यसलाई भित्र छोडिदिन्छु। फ्रिज एक दिन र भिजेको हातहरुमा म यसलाई आकार दिन्छु र स्थिर गर्दछु। मलाई आशा छ कि यसले कसैलाई मद्दत गर्दछ शुभकामना
तपाइँको टिप्पणी ईवा को लागी धन्यवाद। वास्तवमा तिनीहरू ह्यामबर्गरहरू हुन् जुन यसलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो हुँदैन किनभने यो मासु होईन। तपाईंको हातहरू भिजाउन र चिसो दिन धेरै राम्रो चाल। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद! 🙂
टोन्डास म्यारिनेट गरिएको चिकन एस्केलोपको साथ
मसूर र पालक सलाद